PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-10-29 - Uyaveva unina womfundi oshaywe ngempama
Uyaveva unina womfundi oshaywe ngempama
UBHODLA umlilo unina womfundi waseMpoqabulungu Secondary, eMandeni, emuva kokuba indodakazi yakhe isole uthishomkhulu walesi sikole ngokushaya ayiphambanise imihlathi ngempama. UNksz Nomusa Masuku uthi akukho ukuphumula azokuthola uma engathathelwa izinyathelo lo thishanhloko ngoba ingane yakhe ihlukumezekile. Lo mfundi uLondiwe Zondo (17) owenza uGrade 11 kulesi sikole, kuthiwa wayephuma endlini encane ngesikhathi uthishanhloko emqhulula ngempama emphindelela.
“Ingane yami igqigqa izibhedlela kumanje yalimala kabi, yayike yalimala phambilini ishaywa uyise omncane, okuyimanje uhamba icala avulelwa lona. Lo thisha ushaye ingane yami kwagqabuka izitishi lapho ebifaswe khona. Ngifuna nomnyango ungilekelele namaphoyisa,’’ kusho uNksz Masuku.
Ukhale ngokuthi selokhu avula icala, akukho zinyathelo athathelwa zona lo thisha usola namaphoyisa ngokumenzela phansi.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uCaptain Nqobile Gwala ukuqinisekisile ukuthi kwavulwa icala lokushaya.
“Icala lenzeka emagcekeni esikole, kwavulwa icala esiteshini samaphoyisa eSundumbili. Kusaqhubeka uphenyo kodwa akekho obesaboshiwe,’’ kusho uCaptain Gwala.
UNksz Masuku uthe okwenza isimo sibe sibi kakhulu, wukuthi ingane yakhe ivele iphila nesifo sokuwa, njengoba iphinde ithola lokhu kuhlukumezeka.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo kwaZulu-Natal uMnuz Muzi Mahlambi, uthe bayazi ngalolu daba futhi bazoqinisekisa ukuthi balulandela ngendlea efane.
“Ithimba lomnyango esifundeni luphezu kwalo udaba luyaphenywa ukuze kuvele ukuthi kwenzekani. Uma seluphothuliwe uphenyo siyobe sesibona indlela eya phambili,’’ kusho uMahlambi.
Khonamanjalo omunye umfundi webanga leshumi wasesikoleni esikwaNongoma , ugcine evunyelwe ukubhala iphepha likamatric emuva kokuxoshwa esikoleni. UThembakuye Sibiya wayexoshwe uthishomkhulu emuva kokumsola ngokubulala impahla yesikole.
UMahlambi uphinde wakuqinisekisa nokubuyiselwa komfundi esikoleni.
“Uyaqhubeka nokubhala umfundi, kodwa siyafisa nokugcizelela ukuthi abafundi kufanele baziphathe ngendlela efanele esikoleni. Njengoba wayonile kwakufanele asithole isijeziso, ubengaxoshiwe ubemiswe izinsukwana.”
KUNZIMA nokudla kumfundi oqhume imihlathi ngenxa yokushawa Isithombe :SITHUNYELWE